निष्ठावान महिला नेतृको अवसान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
आकस्मिक विभागका चिकित्सकहरुले ‘कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन’ (स्वासप्रस्वास प्रक्रियालाई सुचारु गराउन छाति थिच्ने लगायतका प्रक्रिया) लगायतका विभिन्न प्रयास गर्दा पनि सफल भएनन् । र, उपचारकै क्रममा करिब एघार बजे तिर उनको निधन भएको घोषणा गरियो ।
भारतीय जनता पार्टीकी वरिष्ठ नेतृ स्वराज सुष्मा पति स्वराज कौशलका साथ जन्तरमन्तर रोडस्थित निवासमा बस्दै आएकी थिइन् । उनकी एक छोरी छिन् । सन् २०१६ मा उनको मिर्गौलामा एकाएक समस्या देखिए पछि एम्समै प्रत्यारोपण समेत गरिएको थियो । त्यसयता उनले आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष सजगता अपनाउँदै आएकी थिइन् ।
स्वराजको निधनप्रति भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेसका राहुल गान्धीलगायतले दुःख प्रकट गरेका छन् ।
‘श्रीमती सुष्मा स्वराजको निधनले अत्यन्त दुःख लागेको छ । देशले एक अत्यन्त आफ्नी प्यारी छोरी गुमाएको छ । सुष्माजी सार्वजनिक जीवनमा गरिमा, साहस र निष्ठाकी प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो । जनताको सहयोगका लागि हमेशा तत्पर रहनुहुन्थ्यो । उनको सेवाभावका लागि सबै भारतीयले उहाँलाई सदैव स्मरण गरिरहनेछन्,’ राष्ट्रपति कोविन्दले भनेका छन् ।
त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि सुष्माको निधनले भारतीय राजनीतिको एउटा यशस्वी अध्यायको अन्त्य भएको जनाएका छन् । ‘सार्वजनिक सेवा र गरीबको जीवनस्तर सुधारका लागि जीवन समर्पण गर्ने एकजना महान नेताको निधनमा पुरै भारत शोकमग्न छ । उहाँ करोडौंका लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्थ्यो,’ मोदीले ट्विटमा लेखेका छन् ।
Sushma Ji’s demise isapersonal loss. She will be remembered fondly for everything that she’s done for India. My thoughts are with her family, supporters and admirers in this very unfortunate hour. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2019
त्यसैगरी विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि सुष्माको निधनप्रति दुख प्रकट गरेको छ ।
भारतीय राजनीतिमा स्वराजको परिचय प्रखर वक्ता र निष्ठावान राजनीतिज्ञको थियो । अघिल्लो मोदी सरकारमा उनी विदेशमन्त्री थिइन् । उनी इन्दिरा गान्धीपछि विदेश मन्त्रालय सम्हाल्ने दोस्रो महिला हुन् । सन् १९५३ मा हरियाणाको अम्बालामा जन्मिएकी स्वराजलाई उनको पार्टी भाजपाभित्र मात्र नभएर पुरै भारतीय राजनीतिका लागि प्रभावशाली पात्रका रुपमा लिइन्थ्यो ।
स्वराजको पहिलो पेशा भने वकालत थियो । उनले केही वर्ष भारतको सर्वोच्च अदालतमा वकालत पनि गरिन् । संस्कृत र राजनीति शास्त्रमा स्नातक र पछि पन्जाब विश्वविद्यालयबाट कानुन अध्ययन गरेकी स्वराज पिता हरदेव शर्माको प्रेरणाले राजनीतिमा लागिन् । शर्मा भारतीय जनता पार्टीको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयं संगठनका प्रभावशाली सदस्य थिए ।
१९७५ मा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएपछि भने सुष्माको सक्रिय राजनीतिक यात्रा शुरु भयो । संकटकालको विरुद्धमा समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले चलाएको सम्पूर्ण क्रान्तिमा उनी सक्रियतापूवर्क सहभागी भइन् । संकटकाल अन्त्य भएको केही समय पछि भने उनी भारतीय जनता पार्टीमा आवद्ध भइन् । त्यसपछि उनले राजनीतिज्ञका रुपमा कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । सन् १९७७ मा पहिलो हरियाणा विधानसभाका लागि चुनिएकी स्वराजले त्यसपछि थप दुईपटक सम्म विधायक चुनिइन् । त्यसपछि उनले सबैभन्दा सानै उमेरमा मन्त्री बन्ने पनि अवसर पनि पाइन । २५ वर्षकै उमेरमै हरियाणा सरकारमा मन्त्री बनेकी थिइन् । १९७९ मा मात्र २७ वर्षको उमेरमै स्वराज हरियाणाको पार्टी प्रमुख बन्न सफल भइन् ।
सन् १९९६ मा पहिलो पटक दक्षिण दिल्ली सिटबाट लोकसभामा निर्वाचित भइन् । त्यसपछि अटल बिहारी बाजपेयीको १३ दिने सरकारमा पनि उनी सुचना तथा प्रसारण मन्त्री बनिन् ।
त्यसको दुई वर्ष नबित्दै भएको लोकसभा चुनाव जितेर मन्त्री बन्ने अवसर पाइन् । त्यसपछि सन् १९९८ मा छोटो समयका लागि भए पनि दिल्ली राज्यको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्ने मौका पनि स्वराजलाई नै प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि भने उनी लगातार केन्द्रकै राजनीतिमा सक्रिय रहिन् ।
सन् १९९९ को लोकसभा चुनावमा सोनिया गान्धीसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएकी स्वराज केही महिनापछि राज्यसभा निर्वाचित भइन् र, उनलाई पुनः सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । सन् २००६ मा पुनः राज्यसभामा चुनिइन् । सन् २००९ को लोकसभा चुनावमा निर्वाचित भए पछि भने उनलाई लालकृष्ण आणवाणीको ठाउँमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बनाइएको थियो । प्रतिपक्षमा रहँदा उनले तत्कालिन मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले गरेका कामकारवाहीका विरुद्धका संसदमा खरो ढंगले प्रस्तुत हुने गर्थिन् ।
सन् २०१४ मा बनेको मोदी सरकारमा भने उनलाई विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा विश्व राजनीतिमा भारतको भूमिका बढाउन विदेशमन्त्रीको रुपमा उनको भूमिका अहं रह्यो । हालै सम्पन्न लोकसभा चुनावमा भने स्वास्थ्यको कारण देखाएर सहभागी भइनन् ।
भारत र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रभावशाली डिजिटल डिप्लोमेसीका लागि पनि उनको स्मरण गरिने छ । सन् २०१४ मा विदेशमन्त्री बनेपछि उनले ट्विटर मार्फत् डिजिटल डिप्लोमेसीलाई अगाडि बढाएकी थिइन् । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आमनागरिकका सरोकार र चासोहरुलाई उनले ट्विटरमार्फत नै जवाफ दिने गर्थिन् । जसले उनको लोकप्रियताको चुलिएको थियो ।
विदेशमा समस्यामा परेका भारतीयहरुको मात्र नभएर पाकिस्तानी र अन्य मुलुकका नागरिकहरुको उद्धार पनि सुष्माको त्यत्तिकै सक्रिय थिइन् । जसले गर्दा भारतमा मात्र नभएर विदेशमा समेत सुष्माले प्रशंसा बटुलेकी थिइन् । ट्विटरमा उनका सवा करोडभन्दा बढी फलोअर थिए ।
मंगलबार साँझ साढे सात बजे मात्र पनि उनले भारतको लोकसभाले जम्मुकश्मिरलाई विशेष राज्य दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेकोमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई करीब बधाई र धन्यवाद दिएकी थिइन् । ‘प्रधानमन्त्रीजी, तपाईलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्छु । म आफ्नो जीवनमा यस दिनका लागि प्रतीक्षारत थिएँ’ उनले ट्विटमा भनेकी थिइन् । तर, त्यसको केही घन्टा नबित्दै ट्विटरमार्फत् नै उनको असायमिक निधनको खबर सार्वजनिक भयो ।
प्रधान मंत्री जी - आपका हार्दिक अभिनन्दन. मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी. @narendramodi ji - Thank you Prime Minister. Thank you very much. I was waiting to see this day in my lifetime. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 6, 2019
नेपालको राजनीतिसँग पनि सुष्मा राम्रैसँग परिचित थिइन् । उनी पछिल्लो पटक अघिल्लो वर्ष असोजमा १५ औं बिमस्टेक शीर्ष सम्मेलनका बेला काठमाडौं गएकी थिइन् । २०७१ सालमा महाभूकम्पलगत्तै भारतले लगाएको अघोषित ‘नाकाबन्दी’ पछि नेपालमा सुष्मा आलोचित बनेकी थिइन् । उक्त ‘नाकाबन्दी’ का कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिन पुगेको थियो ।
त्यसपछि नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयास स्वरुप उनी तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी एकीकृतको गठबन्धनले संसदीय चुनाव जितेपछि नयाँ सरकार गठनपूर्व नै काठमाडौं ओर्लेकी थिइन् । जानकारहरु सुष्माको उक्त भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुधारको बाटोमा अगाडि बढाएको ठान्छन् ।
यसैबीच सुष्माको निधन प्रति उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि समवेदना प्रकट गरेका छन् । ‘भारतकी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा पूर्व विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको निधनको खबरले अत्यन्त मर्माहत छु,’ ओलीले ट्वीट गर्दे भनेका छन् ।
Deeply shocked to learn of the passing away of Smt. Sushma Swaraj,asenior political leader of India and former External Affairs Minister. Heartfelt condolences and deepest sympathies to the Government and people of India as well as to the bereaved family members. — K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) August 7, 2019